Binance APP : My favorite Trading App Burmese Edition | Binance Blog
Binance APP : My favorite Trading App Burmese Edition
BUSD $ 600 အနိုင်ရ ဖို့ Binance (ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး Trading ) ကို join ကြ စို့
နှစ်လယ်ပိုင်း အစီအစဥ် တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာ crypto trading app Binance နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင် ရန် သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောBinance app function သို့မဟုတ်စာမျက်နှာ ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပါ။ Binance သည်သင်၏အကောင်းဆုံး crypto trading app တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။ BUSD ရှိဒေါ်လာ ၆၀၀ တန် ကံစမ်းမဲမှအခွင့်အလမ်းရရန် Facebook ပေါ်တွင်တင်ပါ
ကျွန်ုပ်မည်သို့ပါ ၀ င်ပါသနည်း။
၁။ ဒီ post ကိုသင်၏ timeline တွင်မျှဝေပြီး အများဆိုင် အဖြစ်သတ်မှတ်ပါ
၂။ ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်ဒီမှာ ကျေးဇူးပြု၍ ပုံစံကိုဖြည့်ပါ။ https://forms.gle/wWz2RorartpYvFiW9
3. Binance application ကို download လုပ်ပါ
၄။ သင်၏ QRcode ဖြင့် Binance အက်ပ်တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလုပ်ဆောင်ချက်မျက်နှာပြင်ကိုဖမ်းယူပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော QR ကုဒ်ဖြင့်ဖန်သားပြင်ကိုမည်သို့ဖမ်းယူနိုင်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ရှာပါ
၅။ binance သည်သင်အကြိုက်ဆုံး crypto trading app ဖြစ်ပြီးမည်သည့် function ကိုသင်မကြာခဏအသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်သင် Binance APP တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်၊ ထို့နောက် Facebook တွင်အများဆိုင်အဖြစ်ဝေမျှရန်ခေါင်းစဉ်ကိုရေးပါ
၆။ tag ထည့်ပါ။ #BinanceMyFavoriteTradingApp #BinanceApp
သင့်သူငယ်ချင်းအနည်းဆုံး ၃ ယောက်ကို Tag လုပ်ပါ
၈။ သင်၏ဒေသဆိုင်ရာ Binance Facebook နှင့် Telegram အုပ်စုတွင် မျှဝေပါ
Facebook : https://www.facebook.com/BinanceBurmese
Telegram : https://t.me/BinanceBurmese
1. Share this post on your timeline and set it as public
2. Please submit the form here to be eligible for this campaign. https://forms.gle/wWz2RorartpYvFiW9
3. Download Binance application
4. Captureascreenshot of your favorite function on Binance app with your QRcode. Please find how to captureascreenshot withaQR code below
5. Write in the caption why binance is your favorite crypto trading app and which function that you frequently use or you like the most on Binance APP and then share on Facebook as public
6. Add tag : #BinanceMyFavoriteTradingApp #BinanceApp
7. Tag at least3of your friends
8. Join Binance Facebook and Telegram group of your local country
နေ့စွဲ - 2021/06/14 00:01 (UTC + 7) - 2021/06/30 23:45 (UTC + 7)
Winner ကြေငြာချက် - 2021/07/09
Campaign Date : 2021/07/14 00:01 (UTC+7) - 2021/07/30 23:45 (UTC+7)
Winner Announcement: 2021/07/09
50%: လူထုမှမဲပေး (အမြင်များ, အကြိုက်, မှတ်ချက်များ၏စုစုပေါင်းနံပါတ်)
50%: Binance အသုံးပြုကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက် နှင့် လမ်းညွှန်မှမှန်ကန်သော စံနှုန်းများနှင့်အညီ Binance-အရှေ့တောင်အာရှကနေမဲပေး
2. အဆိုပါဆုရရှိသူ 7th ဇူလိုင်လပေါ်တွင် Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြေညာခဲ့သည်မည်ဖြစ်ပြီးအနိုင်ရ post ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာလမ်းကြောင်းများအနှံ့ shared လိမ့်မည်။
1.Criteria for the winner in the competition:
50%: Voting from Binance-SEA according to2criteria: Good reason for using Binance and Provide correct caption due to guideline.
2. The winners will be announced on the Facebook page on 7th July and the winner post will be shared across social media channels.
1. သင်တန်းသားများအကျိုးကိုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ဖို့ပုံစံတင်ပြရပေမည်။ https://forms.gle/wWz2RorartpYvFiW9
၂။ လှုပ်ရှားမှုပြီးဆုံးပြီးနှစ်ပတ်အကြာတွင်ဆုများကိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောပါ ၀ င်သူများအားဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်သည်။
၃။ အိုင်ပီကိုအခြေခံသည့်ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနှင့်မြန်မာသုံးစွဲသူများသာဤမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
၄။ Binance သည်မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖျက်သိမ်းသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၆။ ဆုရရှိသူမှကြေငြာပြီးနောက် ၂ ပတ်အတွင်းဆုရရှိသူသည်ဆုကိုစင်တာတွင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
၇။ ငွေဖြည့်တင်းပြီးသည့်နောက် ၂ ပတ်အတွင်းငွေသားထုတ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်
1. Participants MUST submit the form to be eligible for the reward. https://forms.gle/wWz2RorartpYvFiW9
3. Only Cambodia, Laos, and Myanmar users based on IP will be able to participate in this campaign.
5. Cash vouchers will be distributed in the form of cash vouchers.
6. Winners can check the reward in the Reward center within2weeks after the winner's announcement.
7. Cash voucher needs to be redeemed within2weeks after distribution completed
"ငါတကယ် Binance အပေါ်ကုန်သွယ်ရေးမှကဲ့သို့ပင် Binance ။ အမြားဆုံးအသုံး function ကို BNB Vault ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားသောငွေဖြစ်လွယ်နှင့်အတူ BNB Vault ကနေတဆင့်သာလျှင်ရှယ်ယာ BNB ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး 1st crypto ကုန်သွယ်စျေးကွက်ဖြစ်ပြီးဒီ function ကိုကနေအမြင့်ဆုံးအကျိုးစီးပွားရရှိလို့ပဲ။
#BinanceMyFavoriteTradingApp #BinanceApp @alexandra @lydia @mathew "
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်မှတ်ချက် - ဤပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်ရေးသားခြင်းသည် ၀ င်သူနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်တက်ရောက်သူမှတင်ပြထားသောပုံ၏မူပိုင်ကို Binance သို့လွှဲပြောင်းပေးမည်ဟုဝန်ခံ ရသည်။ သင်တန်းသားများအားလုံးသည်တင်ပြချက်များကိုကူးယူခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ပြသခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းများအပါအ ၀ င် Binance ကိုပေးအပ်သည်။ Binance သည်အပြီးသတ်အနက်ဖွင့်ဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။